अब आईएमईआई नम्बर दर्ता नगरे चल्दैन मोबाइल, कसरी गर्ने दर्ता ? « Mero LifeStyle
अब आईएमईआई नम्बर दर्ता नगरे चल्दैन मोबाइल, कसरी गर्ने दर्ता ?
सुमित्रा लुईंटेल	||6July, 2021
विदेशबाट उपहार अर्थात् बिना भन्सार नेपाल भित्रिएका मोवाइलमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निगरानी बढाएको छ । प्राधिकरणले २०७८ साउन १ गतेपछि नेपाल भित्रिने मोवाइलको आईएमईआई नम्बर सरकारी निकायमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ ।
आईएमईआई नम्बर दर्ता नभए त्यस्ता मोवाइल नेपालमा नचल्ने प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले बताए । ‘हामीले साउन १ गतेपछि विदेशबाट उपहार तथा बिना भन्सार नेपाल भित्रिने मोबाइलमा यो नियम अनिवार्य गरेका हौं,’ उनले भने, ‘हाल नेपालमा विदेशबाट थुप्रै मोबाइल भित्रिएका छन्, ति बन्द हुँदैनन् तर, दर्ता गर्दा राम्रो हुन्छ । साउनपछि भने अनिवार्य दर्ता गर्नैपर्छ ।’
यो नियम प्राधिकरणले ४–५ वर्ष अघि नै ल्याउको थियो । तर, पालना नभएकाले यसपालीबाट कडिकडाउ गर्न लागिएको पौडेल बताउँछन् । ‘धेरै फोनहरु राजश्व छल गरी नेपाल भित्रिन्छन् तिनै राजश्वको दायरामा ल्याउन यसो गरिएको हो,’ पौडेल भन्छन्, ‘हराएका मोबाइलहरु छिटो पत्ता लगाउन र आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रणमा लिन पनि यसले सघाउँछ ।’ यद्यपि,व्यवसायीहरुले आयात गरेका मोबाइल फोनको आईएमईआई नम्बर उनीहरुले नै दर्ता गरिदिन्छन् ।
विदेशमा किनेको वा उपहारमा आउने मोवाइलको आईएमईआई नम्बर अनलाइनबाटै दर्ता गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने पौडेलले स्पष्ट पारे ।
मोवाइलको आईएमईआई नम्बर कसरी थाहा पाउने ?
– मोबाइल प्रयोगकर्ताले *#06# डायल गरी मोबाइलको आईएमआई नम्बर हेर्न सक्छन् ।
– मोबाइलमा दुईवटा सिम लाग्छ भने दुईवटा आईएमआई नम्बर हुन्छ । दुईवटा सिम प्रयोगकर्ताले दुवै नम्बर दर्ता गर्नु पर्छ ।
कसरी गर्ने आईएमईआई दर्ता ?
– आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेबसाइडमा जाने ।
– त्यहाँ आईएमईआई नम्बर रजिस्ट्रेसन भन्ने लिंकमा गएर साइनअप गर्ने ।
– साइनअप गरेपछि त्यहाँ ‘न्यु इम्पोटर’ र ‘इन्डिभिजुअल एप्लिकेशन’ अप्सन देखिन्छ ।
– इन्डिभिजुअल एप्लिकेशनमा क्लिक गरेसँगै एउटा फारम प्राप्त हुने छ । उक्त फारममा त्यहाँ बताएअनुसार जानकारी भर्ने ।
– सरकारबाट उपलब्ध गराइएको कुनैपनि एउटा आधिकारिक परिचयपत्रको स्क्यान कपी पनि अपलोड गर्ने ।
– आयातकर्ता कम्पनीको हकमा उसले ल्याउन लागेको मोबाइल डिभाइसको आईएमईआई सामान आयात गर्नुपूर्व नै पाउँछन् । किनभने उनीहरुलाई प्राधिकरणले युजर आईडी र पासवर्ड उपलब्ध गराएको हुन्छ । सोही अनुसार आयातकर्ताले यो लिंकमा गएर लगइन गर्न सक्छन् । त्यहाँ टाइप अप्रुभल लिनेदेखि आईएमईआई नम्बर अपलोड गर्न सकिने सम्मको सुविधा छ ।
– आईएमईआई नम्बर अपलोड भएसँगै प्राधिकरणमा निवेदन दिन सकिन्छ । उक्त निवेदनको आधारमा आईएमईआई नम्बर मान्य छ वा छैन । सिस्टममार्फत जाँच हुन्छ । सबै मिलेपछि प्राधिकरणको सिस्टममा आईएमईआई नम्बर दर्ता हुन्छ ।
– यदि अनलाइन दर्ता प्रक्रियामा प्राविधिक समस्या वा थप जानकारी आवश्यक भए नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सम्पर्क नम्बर ०१–४२५५४७४ मा फोन गर्न सकिन्छ ।